Chii chinonzi linear economy | Economy Finance
Encarni Arcoya | 12/01/2022 11:48 | Yakagadziridzwa ku 12/01/2022 11:59 | General hupfumi
Imwe yei mbiru dzakakosha dzekushanduka kwemamiriro ekunze dzine chekuita nehupfumi, uye zvakanyanya neiyo mutsara hupfumi. Kutenda kana kusatenda, bazi iri rinogona kuwana shanduko yenharaunda nekuda kwekuvandudza nharaunda.
Asi, kuti uiwane, unofanirwa kutanga waziva kuti hupfumi hwemutsara chii, nei isina kunaka uye nemhedzisiro yainogona kuunza mune iyi kesi.
1 Chii chinonzi linear economy
2 Sei iyo linear economy yakashandiswa
3 Ndedzipi njodzi dzeiyo linear economy
4 Ndeipi mhinduro iripo
4.1 Kune nyika dzinoishandisa here?
Kuti unzwisise hupfumi hwemutsara hapana chinhu chiri nani pane kupa muenzaniso. Fungidzira kuti uri kuzogadzira chigadzirwa chaunoda midziyo yaunotora kubva pasi. Iwe unoigadzira uye kana yamira kushumira, kungave nekuti yakatyoka, nekuti haichashanda, nezvimwe. unongoirasa. Uye iwe unoramba uchigadzira uye ivo vanoda zvigadzirwa. Asi hapana kana nguva yauri kuvazadza. Saka, pakupedzisira, kuchauya zuva apo izvo zvekushandisa pazvinenge zvisisipo.
The linear economy inogona kutsanangurwa se iyo yechinyakare modhi yekugadzira zvigadzirwa uye / kana masevhisi isu tinotora mbishi zvinhu izvo zvisingazodzorerwe gare gare. Mune mamwe mazwi, hapana kushandiswazve, kudzikiswa kwezvinhu, kudzokorodza kana kudzoreredza zvinhu izvi mbishi (kana zvichibvira).
Muchokwadi, mhedzisiro yehupfumi hwemutsara imarara kana marara ayo, achida kana kusada, anoungana papasi uye izvi zvinozove nemhedzisiro yakaipa kune zvakatipoteredza.
Sei iyo linear economy yakashandiswa
Uhu rudzi rwehupfumi hwave huri hwechinyakare kwenguva refu. Muzuva rake, kuwanda kwezvinhu mbishi kwakaita kuti vasafunga zvaizoitika kana yapera. Muchiitiko ichi, pakati pekutarisa, uye izvo zvinouya pekutanga purofiti, kugadzirisa nguva uye nemari shoma, asi pasina kufunga nezvezvakatipoteredza kana zvemagariro mutengo waikonzerwa.
Kune izvi zvinofanira kuwedzerwa, kunyanya pakutanga, iyo kusaziva kuti chii chaive chakakosha uye chii chakakonzerwa nekushandisa zvinhu izvi, pamwe chete nehupenyu hwekupedzisira hwechigadzirwa ichocho (marara).
Ehe, izvi hazviregi basa iro munhu ane, asi panguva iyo mutsara hupfumi hwakazvarwa, ivo vaive vasina ruzivo rwakawanda uye zvishandiso zvinogona kuzivisa mhedzisiro yekushandisa nzira iyi.
Ndedzipi njodzi dzeiyo linear economy
Mushure mezvose zvatakatsanangura, zvinova pachena kuti linear economics haisi chinhu chakanaka, asi chinhu chakaipa kwazvo. Uye zvinosanganisira njodzi nemhedzisiro iyo, kana isina kugadziriswa, inogona kugumisa kuvepo kwehupenyu, zvese chirimwa, mhuka uye vanhu.
Imwe yemhedzisiro huru uye njodzi dzeiyo linear economy ndeye greenhouse gasi kubuda. Izvi zvinoitika nekuda kwekutsva kwehuni, kutema miti, kushandiswa kwefetereza nezvimwe. Izvo zvinoita kuti tive tichikuvadza mhepo, pasina mukana wekuzvarwa patsva. Kureva? Dai iyo denderedzwa iyo inotidzivirira kubva kunze uye inotibvumira kufema, kuneta, uye nayo, inowedzera kuoma kufema uye kurarama.
Imwe njodzi ndeyekurongedza uye kutambisa zvigadzirwa. Chinonyanyozivikanwa ndechekuti idzi dzinopedzisira dzapinda mumarara izvo zvinoreva kuti dzinoenda kunoraswa, dzinopiswa kana kuti hongu, dzoendeswa kunze kwenyika uko dzinoshandiswazve ikoko. Dambudziko nderekuti zvese izvi kunenge kuri kusvibisa zvakanyanya. Fungidzira nzvimbo yekurasira marara ehupfumi hwemutsara. Kana tikasagadzirisa izvi, zvinokura zvichikura uye dambudziko nderekuti zvinosvibisa zvese zviri zviviri pasi nemhoteredzo.
Maererano nedata, gore rimwe nerimwe matani ane mabhiriyoni 90 ezviwanikwa anocherwa uye zvinotarisirwa kuti panosvika gore ra2050, kana izvi zvikaramba zvakadaro, nhamba iyoyo ichapeta kaviri. Pane ese aya, gumi nemaviri% chete anodzokororwa, izvo zvinoreva kuti zvimwe zvese zvinoramba zvichichengetedza mutsara kutenderera.
Mukupedzisa, tiri kutaura nezvemhando yemhando iri kuparadza pasi zvisingadzoreki. Raw zvinhu zvakapera, tsvina inokonzera migumisiro uye, kunyange zvazvo migumisiro inoparadza isati yaonekwa, zvinozivikanwa kuti zvichaitika uye kuti mune ramangwana nyika yaisagona kuva nzvimbo inogarwa, ichishora vana kuti vawane imwe nzvimbo yekugara. kuchinja mararamiro ako kana, zvakananga, kukundwa.
Ndeipi mhinduro iripo
Nekufamba kwenguva, uye humbowo hwakajeka hwenjodzi dzaisanganisirwa neupfumi hwemutsara, vakatanga kufunga nezveimwe nzira yaive isiri njodzi kune zvakatipoteredza. Nokudaro, imwe yemafomu anokurudzira kuchengetedza kwezvakatipoteredza yakasimuka. Ndeipi iyoyo? The denderedzwa upfumi.
La Upfumi hwedenderedzwa hunobva pakushandisa zviwanikwa, kuzvishandisa nemazvo nekudzora magadzirirwo nemashandisirwo azvo. Chinangwa ndechekuisa kukosha, uye kwete purofiti yakawanda, kuitira kudzoreredza zvinhu zvinoshandiswa uye kudzivirira kutambisa zviwanikwa.
Kuti uite izvi, vagadziri vanokurudzirwa kugadzira zvigadzirwa izvo zvinozoshandiswa zvakare. Kwete chete chigadzirwa pachayo, asi zvinhu zvayo uye kunyange iyo yakasvibirira iyo yakagadzirwa. Kukurudzira kugadzira zvigadzirwa zvinogara zvakanyanya uye zviri nyore kugadzirisa, kugadzirazve uye kushandiswa zvakare ndechimwe chezvakakosha zvikamu zvehupfumi izvo zvinouya kuzorwisa iyo yechinyakare mutsara.
Kune nyika dzinoishandisa here?
Ndizvozvo, MuEurope tinogona kuratidza Germany neFrance senyika mbiri dzinoshandisa hupfumi hwedenderedzwa munzira dzakasiyana siyana. Panyaya yeSpain, kunyangwe isu tichishandisa hupfumi hwedenderedzwa, ishoma uye hupfumi hwemutsara huchiri kudzika midzi. Nekudaro, muna 2020 iyo Spain Circular 2030 zano rakaburitswa, iro rinovhara hwaro hwekushandisa kutsva uye modhi yekugadzira yakatarisana nekushandisa zvakare uye kudzokorodza. Nezvo zvinotarisirwa kuderedza migumisiro yehupfumi hwemutsara.
Mhedzisiro yacho haisi kuzowanikwa munguva pfupi, zvirokwazvo. Asi zvirinani isu tinotanga kutora matanho ekutanga kuyedza kumisa kuparara kwepasi nemhoteredzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi linear economy
Chii chinonzi mutero wemuhoro wega